Allgedo.com » 2012 » October » 09
Home » Archive Daily October 9th, 2012
Madaxweyne-yaasha Soomaaliya iyo Kenya oo ka wada hadlay Xaaladda Kismaayo
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud oo ku sugan Magaaladda Kampala ee dalka Uganda ayaa kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalka Kenya Mwai Kibaki. Labada dhinac ayaa waxaa ay ka wada hadleen xariirka labada dal iyo xaaladaha Magaaladda Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubada Hoose. Madaxweynaha Kenya ayaa ugu hanbalyeeyay Madaxweynaha Soomaaliya qabashada xilka ugu sareeya Soomaaliya isagoo...
Howlgalo ka socda Kismaayo iyo qarax xooggan oo maanta ka dhacay
Wararka ka imaanaya Magaaladda Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowlada Soomaaliya ay halkaas ka wadaan Howl galo balaaran. Howl galadan ayaa ka danbeeyay kaddib markii qarax xooggan uu magaalada ka dhacay kaas oo lala eegtay ciidamada dowlada Soomaaliya. Goob joogayaal ayaa Allgedo u sheegay in qaraxa uu ahaa Bambo lagu tuuray ciidamo ka tirsan dowlada, waxaana lasoo...
Amisom: Qorshaha aan ka leenahay Buur-hakaba waa inaan isku furnaa Muqdisho iyo Baydhabo
Taliska ciidamada Midowga Afrika ee Amisom ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay gaari doonaan dhawaan Magaaladda Buur-hakaba ee gobolka Bay. Isagoo la hadlayay qaar ka mid ah saxaafada ayaa Afayeenka Ciidamada Midawga Afrika ee AMISOM Col. Cali Aadan Xumed waxaa uu sheegay in Buur-hakaba ay tahay Magaalo Muhiim ah. “Magaalada waa mid aad muhiim inoogu ah, maxaa yeelay waa magaalo istiraatiji...
Eriteria oo Golaha amaanka ka dalbatay in cuna qabataynta ay ka qaadaan
Dowlada dalka Eriteria ayaa ka dalbatay golaha amaanka ee QM in ay ka qaadaan cuna qabataynta saaran. Eriteria ayaa cuna qabatayn lagu soo rogay sedex sano ka hor kaddib markii lagu eedeeyay in ay garab siiso kooxda Al-Shabaab ee xariirka la leh Al-Qaacida. Hadal kasoo baxay Waaarada Arimaha dibadda ee dalka Eriteria ayaa looga dalbaday QM in maadama lagu waayay danbigii ahaa in ay kaalmo ciidan siiyaan...
Khilaafkii ka dhex jiray Maamulka Gal-mudug oo cirka isku sii shareeray iyo Caalin oo Gaalkacyo tagay
Waxaa cirka isku sii shareeyay Khilaafkaa ka dhex jiray Maamlka Gal-mudug kadib markii uu shalay halkaas gaaray madaxweynihii xilka laga qaaday Maxamed Axmed Caalin. Dad aad u badan ayaa kaga hortagay garoonka diyaaradaha ee Gaalkacyo si ay usoo dhaweeyaaan Mr. Caalin oo sheegay inuu yahay Madaxweynaha xaqa ah ee Maamualka Gal-mudug. Caalin ayaa sheegay inuu doonayo in wax kasta lagu xaliyo wadahadal,...
Xiisado Dagaal oo ka jira Magaaladda Buur-hakaba iyo Shabaab oo dib ugu soo laabtay
Wararka ka imaanaya Magaaladda Buur-hakaba ee gobolka Bay ayaa sheegaya in halkaas ay ka soconayaan abaabulo dagaal oo udhaxeeya ciidamada dowlada Soomaalia iyo kuwa Amisom oo isku dhinac ah iyo Shabaab. Al-Shabaab oo xili hore oo shalay ah isaga baxay Magaaladda ayaa dib ugu soo laabtay xalay iyagoo sameeyay howlgalo balaaran. Saraakiil katirsan Kooxda Shabaab ayaa meel fagaaro ah kala hadlay dadka...
Howl galo ka socda Muqdisho iyo Taraafikada wadooyinka oo qalab cusub helay
Waxaa maanta wadooyinka Magaaladda Muqdisho ka soconaya howl galo ay samaynayaan ciidamada Taraafikada dowlada Soomaaliya. Ciidamada Taraafikada ayaa baaraya gaadiidka aan Taarikada lahayn ee ku sugan magaalada. Isagoo la hadlayay saxaafada ayaa Taliyaha Ciidamada Taraafikada Jen. Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) waxaa uu sheegay in lasoo gaarsiiya qalab cusub oo awood u yeelanaya in si deg deg ah loo...
Bandow ka dhaqan galay Kismaayo iyo howl galo balaaran oo socda
Magaaladda Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa xalay gashay xaalad bandow ah iyadoona ay ilaa iyo haatan soconayaan howlgalo lagu xaqiijinayo amaanka. Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Raaskambooni ayaa howlgalo balaaran ka wada gudaha Magaaladda, iyadoona bandowgii xalay uu hirgalay fiidkii hore. Goob joogayaal ayaa Allgedo u sheegay in ku dhawaad 10 Ruux lagu soo qabtay howlgalkii xalay,...